You Nwere Mgbasa Ozi Gị Ọhụrụ? | Martech Zone
Fraịde, Jenụwarị 7, 2011 Fraịde, Machị 1, 2013 Douglas Karr
Enwetara m ozi email mara mma site na Best Buy Zonegwọ Ọrụ Mpaghara taa. Ezigbo ozi email nwere ihe osise na-enye onyinye na onyinye siri ike. Otu onyinye na-adọrọ m n’anya bụ 16Gb SD Kaadị maka $ 24.99.
M pịa njikọ ahụ ma gwa m ka m banye. Agbalịrị m ịbanye ma mesịa ọ dara. M nwalere 2 nchọgharị, gbalịrị nọmba akaụntụ m na adreesị email m… na enweghị ike ịme paswọọdụ weghachite. M mere mkpesa na Twitter na @Coral_BestBuy gbalịrị inyere m aka. Ọ kọwara na m na-abanye na Best Buy - ọ bụghị wardgwọ Ọrụ ,gwọ, na-achọ ka m debanye aha na Best Buy n'agbanyeghị na enweelarị m Akaụntụ wardgwọ Zonegwọ.
M debara aha m. N'otu oge na usoro ndebanye aha, achọrọ m ịbanye nọmba mpaghara wardgwọ Ọrụ m - echere m na m ga-ejikọta akaụntụ abụọ ahụ. Ozugbo m nyefere ya, peeji ahụ mere ka ọ nweta ume ọhụrụ na ọnụọgụ nke akara. Enweghị ozi njehie. Enweghị m ike ịga n'ihu ma ọ bụ laghachi na onyinye ahụ. Ike gwụrụ m.
Ọtụtụ mmadụ ga-adaralarị ogologo oge tupu m kwụsị, mana achọrọ m ịchọpụta etu o si sie ike. Nsogbu dị ebe a bụ na otu email ahụ nwere ike ị nweta nsonaazụ mgbasa ozi dị egwu ugbu a… ọ bụ ezie na nsogbu ahụ dị na saịtị weebụ. Chọ ka mmadụ gafee ọtụtụ usoro ga-emerịrị ndị ahịa ọ bụla iwe.
Ọ bụla ọzọ nzọụkwụ na usoro a na-aga dobe gị tọghatara site 50%. Ana m eme ka ọnụọgụgụ ahụ, mana ejiri m n’aka na ezigbo pasent ka njọ. Must ga-enyerịrị onye na-azụ gị ụzọ dị nro, nke nwere uche iji tọghata iji bulie nsonaazụ mgbasa ozi. Chọrọ ndebanye aha, ndebanye aha na sistemụ 2, na-agbagha onye ọrụ…. ya niile na-eduga na ịzụ ahịa ịzụ ahịa gbahapụrụ.
Kedu oge ikpeazụ ị debanyere aha na saịtị gị maka ngosi, nbudata, ma ọ bụ ọbụna nwalere ịzụta? M na-agbalị ime ya oge ọ bụla na mgbe niile ahụ egwu njehie. N'ezie, mgbe m bidoro email opt-in, enwere m njikọ ịdenye aha na saịtị m nke na-atụ aka na peeji na-ezighi ezi! Chei!
Tags: ule mkpọsaemailnyocha emailule